၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧရာဝတီလင်းပိုင်များ ကျက်စားရာနယ်မြေ
ဧရာဝတီ လင်းပိုင် (Orcaella brevirostris) များကို အာရှတိုက်တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့တောင်အာရှဒေသ၏ မြစ်ကြီးများဖြစ်သော ဧရာဝတီမြစ် ဂင်္ဂါမြစ် နှင့် မဲခေါင်မြစ် တို့အပြင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဘော်နီယိုကျွန်းပေါ်ရှိ မဟာခန်မြစ်ကြီးထဲတွင် တွေ့ရှိရပြီး လင်းပိုင်မျိုးစိတ်တစ်ခုကို ဧရာဝတီလင်းပိုင်ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ဧရာဝတီလင်းပိုင်များ ကျက်စားနေထိုင်လေ့ရှိသော နေရာများမှာ ဗန်းမော်နှင့် မန္တလေးမြို့အကြားရှိ မြစ်ပိုင်းအတွင်းတွင် ဖြန့်ကြက်သွားလာ ပေါက်ဖွား ရှင်သန်လျက်ရှိသည်။ ဧရာဝတီ လင်းပိုင်သည် ရေနေ နို့တိုက်သတ္တဝါ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီ လင်းပိုင်သည် အရှေ့တောင်အာရှ၏ ထင်ရှားသော ပြယုဂ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။
မန္တလေးမြို့အနီးတွင် ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း၌ ရှားပါးမျိုးတုန်းတော့မည် ဖြစ်သော ဧရာဝတီလင်းပိုင်များ မှီတင်းနေထိုင်နေကြသည်။ Orcaella brevirostris ဟု သိပ္ပံအမည်ပေးထားသော လင်းပိုင်များသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၄-မျိုးသာ ကျန်ရှိတော့သည့် ရေချိုလင်းပိုင်ငါးများအနက်မှ ရှားပါးမျိုးနွယ်ဝင် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့် ရာစုနှစ်အတွင်း ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း နေထိုင်ကြသည့် ရေချိုလင်းပိုင်ငါး အရေအတွက် ၆၀% အထိ လျော့ကျသွားခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် ရရှိနိုင် သမျှသော အကောင်းဆုံး ခန့်မှန်းထားသည့် ဧရာဝတီလင်းပိုင်ငါး အရေအတွက်မှာ ၅၉ ကောင်သာ ဖြစ်သည်။
ဤလင်းပိုင်ငါးများသည် ၂ မီတာမှ ၂.၇၅ မီတာအထိ အလျားရှိကြပြီး၊ အပြာနက်မှောင်အရောင်နှင့် မီးခိုးရောင်အရင့် အရောင်ရှိကြသည်။ ဤလင်းပိုင်ငါးများသည် လူများနှင့် ရင်းနှီးစွာ ပေါင်းသင်း၍ ပူးပေါင်းဆက်ဆံမှု ရှိကြပြီး၊ ဤအချက် မှာ လူနှင့် တိရစ္ဆာန်များ ဆက်ဆံရေးအတွက် လေ့လာမှုပြုရန် အထူးအခွင့်ကောင်း ဖြစ်သည်။ ငါးများ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု ပုံစံပြောင်းလာခြင်း၊ ရေ အရည်အသွေးကျဆင်းလာခြင်း၊ မြစ်ကြောင်းရေစီးများ ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ၎င်းရေသတ္တဝါများ အရေအတွက်လည်း ကျဆင်းလာနေပါသည်။ ဧရာဝတီမြစ်၊ မေခ၊ မေလိခ မြစ်များတွင် ဆည်များ တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက မူလကတည်းက ရှားပါးမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်နေသော ဧရာဝတီလင်းပိုင်ငါးများ ရှားပါးပျောက်ကွယ်စေရန် ခြိမ်းခြောက်မှုကြီး ဖြစ်နေစေသည်။
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ရေနေ နို့တိုက်သတ္တဝါဖြစ်သည့် ဧရာဝတီလင်းပိုင်များ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သုတေသန လုပ်ငန်းများကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်၊ ဧရာဝတီလင်းပိုင်နှင့် ရေလုပ်သားတို့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်း ငါးဖမ်းသည့် ရိုးရာ အလေ့အထကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်၊ ဧရာဝတီလင်းပိုင်နှင့် ငါးမျိုးပြုန်းတီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသော တရားမဝင် ငါးဖမ်းဆီးခြင်းများ (လျှပ်စစ်ရှော့တိုက်ခြင်း၊ မိုင်းခွဲခြင်း၊ အဆိပ်ချခြင်း) နှင့် မြစ်ချောင်းများအတွင်း ရွှေတူးဖော်မှုများ ပပျောက်စေရန် ဧရာဝတီလင်းပိုင် မျိုးမသုဉ်းစေရေးအတွက် ပြည်သူများက ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ကာကွယ်လာစေရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေကို သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေဖြစ်သည့် မင်းကွန်းနှင့် ကျောက်မြောင်းမြို့ အကြားသို့ မန္တလေးမြို့မှ စက်တပ် ရေယာဉ်ဖြင့် ဆန်တက်၍လည်းကောင်း၊ မန္တလေးမှ စဉ့်ကူးမြို့သို့ ကားဖြင့် သွားရောက်ပြီး စက်တပ်ရေယာဉ်ဖြင့် စုန်ဆင်း၍လည်းကောင်း သွားရောက် လေ့လာနိုင်သည်။
ဧရာဝတီလင်းပိုင်တို့ကို တောင်အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှတို့၏ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင်လည်ကောင်း၊ မြစ်ကြီး (၃) စင်းဖြစ်သော မဲခေါင်မြစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဧရာဝတီမြစ်နှင့်၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဘော်နီယိုကျွန်းရှိ မဟာခမ်မြစ်တို့တွင်၎င်း တွေ့နိုင်သည်။
↑ "Orcaella brevirostris" (2017). IUCN Red List of Threatened Species 2017. IUCN.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Perrin, W. (2010)။ Orcaella brevirostris (Owen in Gray, 1866)။ World Cetacea Database။ World Register of Marine Species။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဧရာဝတီ_လင်းပိုင်&oldid=716686" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။